एनअारएन कार्डकाे अावश्यकता किन? « Mom Nepal
अनिल पाण्डे /‘देश छोडेर विदेश जाने, उतैको नागरिक पनि बन्ने, अनि मुलुकप्रति चिन्ता देखाउनेहरुप्रति मेरो आपत्ति छ’– कतिले यसो भनेको यस लेखकले पनि पढेको वा सुनेको छ । के तपाईं यस भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ ? तर, यो लेखक छैन । माइतीबाट बिदा भएर अपरिचित ठाउँमा घर गर्न जानु नेपाली चेलीको जुन नियती हो, त्यही नियती भोगिरहेछन् जन्मभूमि छोडेर परदेश बस्नेहरु ।
‘तँ विवाह गरेर श्रीमानकाे घरमा गएकी, माइतीको चिन्ता किन गर्छेस्, तँलाई जन्मघरको चिन्ता गर्ने अधिकार छैन’ भनियो भने, के चेलीमाथि न्याय होला ?
राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक उत्पादनको अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षा, भ्रष्टाचार र अराजक वातावरणबाट दिक्क भएर मात्र कसैले मुलुक छोडेको हो ।
आजभोलि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानको अध्यागमन जानुहोस्– थाइल्याण्ड, सिंगापुर, दिल्ली, कुवेत, कतार मात्र होइन नेपालजस्तै अल्पविकसित बंगलादेशतिर उड्ने विमानमा पनि टन्न साहूको ऋण काडेर विदेश पसेका खचाखच मजदुर, विद्यार्थी भेटिन्छन् । के ती सबै रहरले रमाइलो गर्न हिंडेका हुन् ? विदेशमा दासजस्तो जोतिएर र शारीरिक तथा मानसिक रुपले शोषित भएर उनीहरु दुई पैसाको मुख हेर्न र फर्केर जीवनलाई आर्थिक रुपले केही सक्षम बनाउन अन्तिम विकल्प रोजेका हुन् । उनीहरु मुलुकमै अनुकूल वातावरण पाएका भए पनि यसरी नै धोती न टोपी भएर प्रवासको अन्धकारमा हाम फाल्थे त ? खासमा मुलुकको राजनीतिसँग पनि यस्ता निम्न स्तरका जनतालाई चासो छैन, चासो छ त केबल जीविकोपार्जनको आकर्षक विकल्प र सामाजिक सुरक्षाको छ ।
राणाशाही, राजतन्त्र, दलविहीन पञ्चायत, दलीय प्रजातन्त्र र आजको संघीय लोकतन्त्रमा पनि आगो बल्ने चुलोको अनुहार नफेरिएपछि जनताले राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँग खासै सम्बन्ध राख्न पनि आवश्यक ठानेका छैनन् । जीविकोपार्जन र सुरक्षा नै उनीहरुका लागि सर्वाधिक चासोका विषय बनेका छन् । विदेशमा कहाँ केपी शर्मा अाेली छन् र, तर पनि रोजगारीको सम्भावना छ, राष्ट्रपतिको पदमा विध्यादेवि पनि छैनन् तैपनि धेरथोर कामको सम्मान छ, प्रतिपक्षमा पुष्पकमल, झलनाथ खनाल र तराईको शासक हुन खोज्ने विजयकुमार गच्छदारहरु– कोही पनि त छैनन् । तैपनि विदेश आउने कसैले उनीहरुलाई ‘मिस’ गरेको देखिन्न । केबल उनीहरुको सम्झनामा साहूको ऋण र परिवारजन मात्र आइरहन्छन् । के अब त्यही सम्झना गर्ने अधिकारबाट पनि विदेशिन वाध्य भएका नेपालीलाई बेदखल गर्नुपर्छ र ?
गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ का आधारमा ल्याइएको नियमावली हरेक गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि प्रिय उपलव्धि हो । दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएका एनआरएनले अहिलेका लागि जे–जति उपलब्धि पाएका छन् त्यो एनआरएन आइडीकै ढोकाबाट छिरेपछि उपभोग गर्न पाइने अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त, आफु जन्मी–हुर्की गरेको मुलुकमा कुनै प्रकारको कानुनी सम्बन्ध कायम नहुने हो कि भनेर चिन्तित रहेका गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकता नै नपाए पनि मन राख्ने आधार भने पाएका छन् । यसका लागि एनआरएन संघका पूर्व नेतृत्व तथा सहयोगी सबै बधाईका पात्र छन् । उनीहरुको निरन्तरको अभियान र आन्दोलन नहुँदो हो त आज नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा आफ्नै जन्मघरमा आफैले भिसा शुल्क बुझाउनु पर्ने अवस्था कायम रहने थियो ।
यसरी परिचयपत्र हासिल गरेको व्यक्तिले नेपालभित्र जग्गा वा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्न पाउँछ । नेपालमा सम्पत्ति जोड्न चाहने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले अाफूले वा आफ्नो परिवारको नाममा खरिद गर्न चाहेको जग्गा रहेको स्थान, क्षेत्रफल तथा खरिद गर्न तयार भएको मूल्य खुलाई स्वीकृतिको लागि परराष्ट्र सचिवसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । स्वीकृति प्राप्त भएअनुसार खरिद गर्न सकिनेछ । जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्ने सम्बन्धित कार्यालयले ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिनुपर्नेछ भनी कानुनमा व्यवस्था छ । ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि ऐन र यस नियमावलीबमोजिम अचल सम्पत्ति खरिद गरेकै कारण ऐन र यो नियमावलीले प्रदान गरेबाहेकको अन्य कुनै हक अधिकार प्राप्त हुनेछैन’ ऐनमा भनिएको छ । जग्गा धनी प्रमाणपत्र नीलो रंगको हुने पनि खुलाइएको छ ।
ऐनअनुसार संघ दर्ता गर्न २५ मुलुकका ५० जना गैरआवासीय नेपालीले मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । दफा ९ मा पूँजी भित्र्याएको प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था पनि छ । दफा १० मा रकम फिर्ता लैजानेसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालमा गरेको लगानी रकम र त्यसबाट प्राप्त भएको लाभ बराबरको रकम प्रमाणपत्रअनुसार फिर्ता लान पाइनेछ । मुनाफाको रकम एकै पटक लैजान सकिन्छ भने मूलधन परिमाणअनुसार किस्ताबन्दीमा फिर्ता लान सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी जग्गा, तराईको शहरी क्षेत्रमा बढीमा आठ कठ्ठा
र अन्यत्र बढीमा चार रोपनी र कति ठाउँमा एक विगाहा र १० रोपनीसम्म पनि जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
लेखक पाण्डे सामाजिक अभियन्ता, कलाकार हुन्। पाण्डे समसामयिक बिषयमा कलम चलाउछन्।